IGolden Apartment - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDodo
"IHolide e-Agmashenebeli" inamagumbi ama-4, igadi eqhelekileyo, i-4 yokupaka iimoto, kwaye yenzelwe ukuba amaqela amaninzi abantu (abahlobo kunye / okanye iintsapho) bahambe ngeHolide kwisakhiwo esifanayo, beqinisekisa ubumfihlo kumbindi wakho ngamnye. indlu yakhe. Amagumbi ama-4, onke afakwe ngendlela entle kunye neyangoku, anendawo yokuhlala "evulekileyo", igumbi lokuhlambela elineshawari. Ukugqitywa kweeflethi zintle kwaye "zinempembelelo enkulu".
Onke amagumbi axhotyiswe ngeeNkqubo eziKhethekileyo ezininzi, ezifana neNkqubo yokuZisebenzela eKhaya (ikhaya elihlakaniphile, kulawulo lwezinto eziluncedo); indawo yezikhongozeli zokuqokelelwa kwenkunkuma, exhotyiswe ngendawo yamanzi yokucoca, ebiyelwe ngokunyuka eluhlaza kwaye ivalwe ngesango.
Inemibono yomlambo, iHolide e-Agmashenebeli ibonelela ngendawo yokuhlala enegadi kunye nepatio, malunga ne-2.4 km ukusuka eRustaveli Theatre. Ipropathi inegadi kunye nembonakalo yesixeko, kunye ne-2.5 km ukusuka kwiZoo yaseTbilisi.
Umbuki zindwendwe ngu- Dodo